Cali Gacal ka Jawaabay Hadalkii Xaaf iyo Sh Shaakir - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Cali Gacal ka Jawaabay Hadalkii Xaaf iyo Sh Shaakir
March 18, 2019 Cali Yare531
Maalma ka hor Madaxweynaha Dowlad goboleedka Galmudug garabka Dhuusamareeb Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo Madaxa Xukuumadda Maamulka Galmudug Maxamed Shaakir waxaa ay siwadajir ah u sheegeen in aysan dhici doonin wax doorasho ah ilaa ay ka dhamaato xilheynta Madaxweyne xaaf,laga soo bilaabo heshiiskii Jabuuti,waxaana hadalkaas si kulul uga hadlay Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Garabka Cadaado.
Guddoomiye Cali Gacal Casir ayaa sheegay in Galmudug la dhisay, kadib markii wadatashi yo dadaal badan la sameeyey,sidoo kalena uu leeyahay dastuur,isla markaana 12 Qabiil in ka badan oo reer Galmudug ah ay maamulkaas yagleeleen.
Waxa uu sheegay in Galmudugta saxda ah ay tahay tii la dhisay Bishii Juun ee la soo xulay Baarlamaanka Maamulkaas,sidoo kalena Dastuurka Galmudug aan waxba lag bedeli karin,waxaana uu sheegay in dhawaan bilaaban doonaan soo xulista Xubnaha Baarlamaanka lana dooran doono Madaxweyne sax ah.
Xaaf Ducaale iyo Sh Shaakir oo ku sugan dhuusamareeb ayuu u sheegay in Dastuurka Galmudug aan waxba laga bedelin,sidoo kalena Xildhibaanada Galmudug ay yihiin 89 Xubnood,Xarunta Baarlamaanka Galmudugna ay tahay Magalada Cadaado cid waxka bedeli kartana aysan jirin.
Khilaafka u dhaxeeya Madaxda Sare ee dowlad Goboleedka Galmudug ayaa sii xoogeystay,kuwaas oo kala degan Magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado,iyaga oo kala leh laba madaxweyne iyo laba guddoomiye Baarlamaan.
Hooyada Dhashay Ninkii Xasuuqay Muslimiintii New Zealand oo hadashay
Hirshabeelle oo baaq u dirtay Beelaha ku Dagaalamaya Degmada Cadale
Madaxweynaha soomaaliya oo hambalyo udiray xildhibaanada aqalka sare
Kenya oo dhaliishay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya